China Model No: NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe mmechi igwe na suppliers | Jikọọ Top
Model No: NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe
Ọrụ：NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe igwe kwesịrị ekwesị karịsịa maka ndị na-emepụta carbon dioxide extinguishers ma ọ bụ karama oxygen
NY Series haịdrọlik cylinders hot spinning igwe nwere NY-180, NY-219, NY299 atọ nkọwa. NY na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpochapu igwe nwere ike imechi mmiri karama oxygen, ọkpọkọ isi mmiri, ọkpọkọ na ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ime obere ọkpọ. Karịsịa nke kwesịrị ekwesị maka onye na-emepụta ọkụ na-agbanyụ ọkụ. Na haịdrọlik clamping, haịdrọlik atụgharị, pụrụ iche imewe, na-eduga technology.
NY Series haịdrọlik cylinders na-ekpo ọkụ spinning igwe nwere ọrụ ntuziaka na ọkara akpaka ụdị.
NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe maka nchara ígwè bụ a enweghị nkebi anwụrụ ihe onwunwe na a ụfọdụ dayameta na ogologo, enịm ke isi aro gbọmgbọm. Site na ịpị cylinder haịdrọlik, pịa, wee tụgharịa ọsọ ọsọ, a na-ewe isi ya ọkụ na tempreplastic, mgbe ahụ, a na-emezi piston na-agba ọsọ ka ọ na-ebugharị ihe mgbochi ahụ, na-anyagharị ntụgharị ahụ, n'ihi ntụgharị nke gear, nke mere na mmechi ahụ na-anwụ na thermoplastic nchara tube extrusion n'ụdị ụfọdụ nke elu.
NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe mmechi arụmọrụ bụ nnọọ elu, adabara uka mmepụta nke nsogbu arịa, dị ka obere na-ajụ-siting ọkụ extinguisher cylinders, nile di iche iche nke mgbali arịa, ji esi mmiri ọkụ collection igbe, wdg NY Series haịdrọlik cylinders na-ekpo ọkụ spinning. igwe bụ teknụzụ ọhụụ etolitere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe nwere ike ịzọpụta a otutu nchara na ume, ọ bụ ihe ọhụrụ anụ ụlọ mmejuputa technology.
NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe na-arụ ọrụ ụkpụrụ
Site na ịpị cylinder haịdrọlik, pịa, wee tụgharịa ọsọ ọsọ, a na-ewe isi ya ọkụ na tempreplastic, mgbe ahụ, a na-emezi piston na-agba ọsọ ka ọ na-ebugharị ihe mgbochi ahụ, na-anyagharị ntụgharị ahụ, n'ihi ntụgharị nke gear, nke mere na mmechi ahụ na-anwụ na thermoplastic nchara tube extrusion n'ụdị ụfọdụ nke elu. Mmepụta arụmọrụ nke NY Series hydraulic na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpochapu igwe dị oke elu, ọ dịkwa mma maka ụlọ ọrụ ndị na-ewepụta akara nke ụgbọ mmiri nrụgide, igbe igbe ọkụ ọkụ na akụkụ ndị ọzọ n'ọtụtụ buru ibu.
.Dị Isi axis ọsọ(r / min) Clamping gbamgbam （KN） Emechi na-egweri cylinder(KN) Ike(KW)
Anyị NY Series haịdrọlik cylinders na-ekpo ọkụ spinning igwe na-enye omenala ama ika igwe akụkụ, anyị na e na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ ụwa na-ama ika soplaya, dị ka SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI na na na ihe karịrị 10 afọ
The kacha nta nlereanya NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe nwere ike na-echebe nke ọma na otu 40 HQ akpa. Ọ bụrụ na ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri, anyị ga-ekpuchi poncho na Ibu oche iji chebe anyị NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning igwe.
Lelee NY usoro mmechi hydraulic na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na Action!
Nke gara aga: China OEM Car Baler Price - Model No: CBJ Series haịdrọlik scrap bale emebi igwe - Unite Top
Osote: Model No: Chinese rụpụta Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shiee baler Machine
igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Ọla kọpa Scrap Baler, Agụba Shear Maka Mobile Digger, Metal Powder Briquette Machine, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine,